နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမေရိကန်-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သတင်းထောက်၏ မေးမြန်းမှုအား ဖြေကြား（၁）
2019-07-25 00:00 source：
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ
Mr. Geng Shuang သည် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ မေးမြန်း၊ ဖြေကြားမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
မေး - တရုတ်-အမေရိကန် “ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ” နှင့်ပက်သတ်ပြီး တရုတ်-အမေရိကန် စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ အခုတစ်ပတ်ထဲမှာ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ဖုန်းပြောဆိုမည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံက မနေ့က ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အတည်ပြု ပေးလို့ရမလားခင်ဗျာ? လက်ရှိအချိန်မှာ နှစ်နိုင်ငံအကြား မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့အတွက် ဘယ်အရာတွေက တားဆီးနေပါသလဲခင်ဗျာ?
ဖြေ - တရုတ်-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာ အမြဲအဆက်အသွယ်ရှိ ပါတယ်။ အသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ ဖုန်းပြောဆိုမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမယ် စတာတွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေဆီ သွားမေးမြန်းဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
မေး - မနေ့က ထိုင်ဝမ်ကို စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့ အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (ကုမ္ပဏီ) ကို အရေးယူမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ပြောကြားပေးလို့ ရမလားခင်ဗျာ? အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံက ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (ကုမ္ပဏီ) တွေကို အရေးယူမှာလဲခင်ဗျာ?
ဖြေ - (သတင်းထောက်အားကြည့်ပြီး) မနေ့က ဖြေကြားခဲ့တာတွေကို ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြောပေးဖို့ လိုသေးလား? (သတင်းထောက်မှ ရယ်ပြီခေါင်းခါ) မလိုအပ်ဘူးဆိုရင် ထပ်မပြော တော့ပါဘူး။
မေး - အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump က ၁၅ ရက်နေ့မှာ Twitter ကနေတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယသုံးလပတ် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၇ နှစ်အတွင်းမှာ အနှေးကွေးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံက အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုကို အရမ်းလိုလားလျက် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေး ပြောကြားလိုပါသလဲ?
ဖြေ - အားလုံး သတိပြုမိကြမှာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်စာရင်းအင်းဌာနကနေပြီး ယမန်နေ့က ပထမနှစ်ဝက် တရုတ်နိုင်ငံစီးပွားရေးလည်ပတ်မှုအခြေအနေ ကိန်းဂဏာန်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါ တယ်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလည်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရှာဖွေဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် စကားအနည်းငယ် ပြောကြားလိုပါတယ် -
တစ်ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးကွေးနေတဲ့အချိန်၊ စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှု တိုးပွားနေတဲ့အချိန်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ ၆.၃% တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရလဒ်ဟာ မဆိုးပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အခြားအဓိကစီးပွားရေးနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာ ရှိပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်နှုန်း ပိုမိုမြှင့်မားစေဖို့အတွက် အားကောင်းတဲ့ စီးပွားရေးလှုံဆော်မှု မူဝါဒ ချမှတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ စီးပွားရေး အရည်အသွေး မြင့်မားစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စီးပွားရေး ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမှတစ်ဆင့် စျေးကွက်တက်ကြွမှုကို လှုံဆော်ပြီး စီးပွားရေးကို တည်ငြိမ်စွာဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဖြစ်တဲ့ ၆.၃ % ဟာ အများမှ ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားတဲ့ရလဒ်နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ မနေ့က တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကိန်းဂဏာန်းတွေကို ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့ အဓိကစျေးကွက်တွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုဟာ ငြိမ်သက်လျက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ အထူးပြု ပြောကြားလိုတာက တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံး စီးပွားရေးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးဟာ ကာလကြာရှည်စွာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ၃၀% ကျော် အထောက် အကူပြုလျက်ရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံစီးပွားရေး တည်ငြိမ်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်လည်း သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ကပြောကြားတဲ့ “စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးတဲ့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ သဘောတူညီမှုရယူဖို့ အလွန်လိုလားလျက်ရှိပါတယ်” ဆိုတာဟာ မှားယွင်းနေပါတယ်။ စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီမှု ရယူရေးဟာ တရုတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်း လိုလားတာမဟုတ်ပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း လိုလားလျက်ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အလွှာအသီးသီးမှ လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ စားသုံးသူတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းကို ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာကနေပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူ အားထုတ်ကြိုးပမ်းကာ အပြန်အလှန် လေးစားခြင်းနှင့် တန်းတူညီမျှဆက်ဆံခြင်းအပေါ် အခြေခံပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ သဘောတူညီမှုတစ်ခု ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုဆောင်ရွက်တာဟာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိပြီး နိုင်ငံတကကနေ မြင်တွေချင်တဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး - အမေရိကန်နဲ့ ရုရှား နှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဟာ နောက်တစ်ပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဂျနီဗာမြို့မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းပြုလုပ်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပြီး နူးကလီးယားလက်နက်ကန့်သတ်ခြင်း သဘောတူ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး Sullivan နဲ့ ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး Sergei Ryabkov တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ မေးခွန်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမမေးခွန်းက တရုတ် နိုင်ငံအနေနဲ့ အခုတစ်ကြိမ် အမေရိကန်-ရုရှား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို ဘယ်လိုရှုမြင်ပါသလဲ? ဒုတိယ မေးခွန်းက တရုတ်နိုင်ငံဟာ “နောက်မျိုးဆက်” လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုမှာ ပါဝင်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အကြိမ်ကြိမ် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သီအိုရီအရ တရုတ်နိုင်ငံဟာ အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်မှာ လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်နိုင်ခြေ ရှိပါသလားခင်ဗျာ?
ဖြေ - အမေရိကန်နဲ့ ရုရှားနိုင်ငံတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နူးကလီးယားလက်နက် အများဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံ တွေဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်နဲ့ ရုရှားနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ သဘောတူညီမှုကို လိုက်နာဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာရန်လည်း တာဝန်ရှိပြီး နူးကလီးယားလက်နက်လျှော့ချရေးကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နူးကလီယား လျှော့ချရေးအား မှန်မမှန်စစ်ဆေးနိုင်သော၊ နောက်ပြန်မလှည့်နိုင်သော၊ ဥပဒေဖြင့်ချည်နှောင်မှုရှိသော ပုံစံဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အလုံးစုံ နူးကလီးယား လက်နက်လျှော့ချရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်နဲ့ ရုရှားနိုင်ငံတို့ရဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေးဟာ ကောင်းမွန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုဟာ ပြင်ပကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်များ ပေးနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ခုနက မေးမြန်းခဲ့တဲ့ ဒုတိယမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အလားတူဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမှာ ပါဝင် မှာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကို အကြိမ်ကြိမ် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ရုရှားနိုင်ငံအကြား အခုလို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမှာ ပါဝင်ဖို့အတွက် အဆိုနဲ့အခြေခံကို တွေ့ရှိခြင်းမရှိပါဘူး။ ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အခါသမယမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တရုတ်-အမေရိကန်-ရုရှား သုံးနိုင်ငံ လက်နက် ထိန်းချုပ်ရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအပေါ် ထားရှိတဲ့သဘောထားကို လက်ခံနားလည်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မေး - ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့မှာ EU နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးကို ဘရပ်ဆဲလ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အီရန်နူးကလီယားပြဿနာ အလုံးစုံသဘောတူညီမှုဟာ အခုအစည်းအဝေးမှာ အဓိကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ EU နိုင်ငံခြားရေးနဲ့လုံခြုံရေးမူဝါဒ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် Mr. Mogherini မှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားရာတွင် အလုံးစုံသဘောတူညီမှုသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိဆဲ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် အစားထိုးအစီအစဉ် မရှိကြောင်း၊ EU အနေဖြင့် သဘောတူညီမှုအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် အီရန်နိုင်ငံအား အလုံးစုံကတိကဝတ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် တိုက်တွန်း ခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ မည်ကဲ့သို့မှတ်ချက်ပေးလိုပါလဲခင်ဗျာ?
ဖြေ - မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ EU နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာ အီရန်နူးကလီးယားပြဿနာ အလုံးစုံ သဘောတူညီမှုအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ တယ်။ မနေ့က ကျွန်တော်မေးခွန်းဖြေကြားစဉ်တွင်လည်း အထူးပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အလုံးစုံ သဘောတူစာချုပ်ကို အစားထိုးလို့မရပါဘူး။ အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှသာ အီရန်နူးကလီးယားပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး တင်းမာသည့်အခြေအနေကို ဖြေလျော့ပေးနိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံရဲ့ ကတိကဝတ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ပြဿနာကို အလုံစုံသဘောတူညီမှု ပူးတွဲကော်မတီစနစ်ဖြင့် ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်း မှာပဲ အလုံးစုံသဘောတူညီမှုရဲ့ အခွင့်အာဏာနဲ့ တာဝန်ကို ညီမျှအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ သဘောတူညီမှု ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးအတွက် အလွန်အရေးပါပါတယ်။
လက်ရှိတင်းမားမှုရဲ့ အဓိကတရားခံဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်း အဖွဲ့ဝင်အမျာစုရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို အလေးထားပြိး အီရန်နိုင်ငံအပေါ် အလွန်အမင်း ဖိအားပေးတဲ့ မှားယွင်းတဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို စွန့်လွတ်ပြီး သဘောတူညီမှု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း အတားအဆီးကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် အီရန်နူးကလီးယားပြဿနာအား နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်း နိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး - မနေ့က တရုတ်ရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကုမ္ပဏီရဲ့ ငွေကြေးကို သိမ်းဆည်းလိုက်တဲ့အကြောင်း မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာများပြောကြားလိုပါသလဲ?
ဖြေ - ကျွန်တော်သိရှိရသလောက် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းဟာ နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့ နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတာပါ။ ကျွန်တော်ပြောလိုတာက တရုတ်နဲ့ မလေးရှား နှစ်နိုင်ငံအကြား ကာလကြာရှည်ပြီဖြစ်တဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်ဆံရေးရှိပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာလည်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအလားအလာတွေ ရှိပါတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကို နှစ်နိုင်ငံအကြား ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းပုံစံဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး - သတင်းထုတ်ပြန်မှုအရ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ နူးကလီယားစမ်းသပ်မှုနဲ့ ဒုံးကျည်စီမံကိန်းကို တုံံ့ပြန် တဲ့အနေနဲ့ EU မှ မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမှာ လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၇ ဦးနဲ့ အဖွဲ့အစည်း ၉ ခုအပေါ် ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ ခရီးသွားလာမှု ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ EU ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပိတ်ဆို့အရေးယူခံရတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ အဆိုပါနိုင်ငံရဲ့ နူးကလီယားလက်နက်၊ ဒုံးကျည်နဲ့ အခြား လူအများအပြား သေစေနိုင်သည့် လက်နက်စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဟာ လက်ရှိ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အခြေအနေအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးသေက်ရောက်မလဲလို့ ယူဆပါသလဲခင်ဗျာ?
ဖြေ - အားလုံးလဲ သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မကြာသေးခင်အချိန်က ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်အခြေအနေအား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး ကျွန်းဆွယ်ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက် အလားအလာကောင်းတွေ တွေ့ရှိရ ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ အခုလို အရေးပါတဲ့အခွင့်အလမ်း ပေါ်ထွက်လာတာကို အလေးထားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေ အတူတကွကြိုးစားအားထုတ်ပြီး လက်ရှိ ကျွန်းဆွယ်မှာ ပေါ်ထွက်နေတဲ့ အလားအလားကောင်းများကို ထိန်းသိမ်းပြီး ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် နူးကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ အဖြေရှာသည့်လမ်းစဉ် ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်း နိုင်ရန်အတွက် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အသီးသိးကနေပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု ကို မျှော်လင့်ပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်နည်းလမ်းကို မလိုလားပါဘူး။
မေး - သတင်းထုတ်ပြန်မှုအရ အမေရိကန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ဌာနချုပ်မှူး Mr. Farrar မှ ပြောကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံးကြွေးရှင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဗင်နီဇွဲလား ပြည်သူတွေကို အကြွေးပိစေပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာများမှတ်ချက်ပေးလိုပါလဲခင်ဗျာ?
ဖြေ - မကြာသေးမီအချိန်က အမေရိကန်အစိုးရအရာရှိများဟာ တရုတ်-ဗင်နီဇွဲလား၊ တရုတ်-လက်တင် အမေရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အကြိမ်ကြိမ် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောဆိုမှုတွေ ဟာ အခြေအမြစ်မရှိပဲ ခိုင်လုံမှုမရှိပါဘူး။
အားလုံးသိရှိပြီးတဲ့အတိုင်း တရုတ်-ဗင်နီဇွဲလား၊ တရုတ်-လက်တင်အမေရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ အပြန်အလှန်လေးစားခြင်း၊ တန်းတူညီမျှဖြင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်း အယူအဆအပေါ် အခြေခံပြီး အတူတကွ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအား အဓိကထားကာ နှစ်ဖက်ပြည်သူများအား အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့သည့်အပြင် အဆိုပါဒေသ၏ စီပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက် အကူပြုသည့်အတွက် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံနှင့် လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများမှ ပြည်သူများရဲ့ ကြိုဆိုမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရမှ အကြောင်းမဲ့ အပြစ်တင်ပြောကြားခြင်းဟာ “မိမိမစားရသည့်စပျစ်မှှာ ချဉ်သည်” ဟု ပြောသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပြီး “ခေတ်သစ် Monroe ဝါဒ” အတွက် အခြေအနေ ဖန်တီးနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အမေရိကန်အစိုးရသည် လက်တင်အမေရိကဖွံ့ဖြိုးမှုအား အမှန်တကယ် ဂရုစိုက် ပါက လက်တွေ့ကျသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့် လူနေမှုဘဝ တိုးတက်မြင့်မားစေရန် ထောက်ပံ့ကူညီသင့်သည်။
တရုတ်-လက်တင်အမေရိက ဆက်ဆံရေးဟာ တန်းတူညီမျှခြင်း၊ အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာခြင်း၊ ပြည်သူအကျိုးပြုခြင်း စသည်တို့အပေါ် အခြေခံသည်။ အခွင့်ထူးခံ မရှိပေ။ အမေရိကန်အပါအဝင် လက်တင်အမေရိကတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံအသီးသီးအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သည့် သဘောထား ထားရှိသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း အလားတူ သဘောထားကြီးရန် မျှော်လင့်သည်။